Ebɛnadze Nye Asɛmpa No? | Asɛmpa
1. Ebɛn asɛm na ofi Nyankopɔn nkyɛn no?
Nyankopɔn pɛ dɛ nyimpa dzi dɛw wɔ asetsena mu wɔ asaase do. Ɔdɔ a ɔwɔ ma adasamba ntsi na ɔbɔɔ asaase nye biribiara a ɔwɔ do no. Ɔnnkɛkyɛr ma oeetu anamɔn ama nyimpa a wɔwɔ asaase do beebiara eenya asetsena a odzi mu. Obeyi ndzɛmba a ɔdze amandzehu ba biara efi hɔ ama adasamba.​—Kenkan Jeremiah 29:11.
Nyimpa tumdzi biara nnyi hɔ a etum eyi emumuyɛsɛm, yarba anaa owu efi hɔ. Naaso, asɛmpa bi wɔ hɔ ma hɛn. Ɔnnkɛkyɛr, Nyankopɔn beyi nyimpa tumdzi nyina efi hɔ na ɔdze no tumdzi abɛhyɛ ananmu. Hɔn a wɔbɛtsena Nyankopɔn tumdzi ase no benya enyigye na apɔwmudzen a odzi mu.​—Kenkan Isaiah 25:8; 33:24; Daniel 2:44.
2. Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ yɛyɛ ntsɛm tsie asɛmpa no?
Sɛ Nyankopɔn yi ndzebɔnyɛfo fi asaase do nkotsee dze a, amandzehu bɔbɔ adze. (Zephaniah 2:3) Ebɛn aber na asɛm yi bɛyɛ hɔ? Nyankopɔn n’Asɛm ahyɛ tsebea a ɔyɛ hu a adasamba wɔ mu ndɛ no ho nkɔm. Ndzebɔnyɛ a ɔrokɔ do wɔ asaase do beebiara no dzi dase dɛ, ber a Nyankopɔn bɔwosow no ho no abɛn.​—Kenkan 2 Timothy 3:1-5.
3. Ebɛnadze na ɔsɛ dɛ yɛyɛ?
Ɔsɛ dɛ yesũa Nyankopɔn ho adze wɔ n’Asɛm Bible no mu. Bible no tse dɛ krataa a egya bi a ɔwɔ ɔdɔ akyerɛw abrɛ hɛn. Ɔma yehu mbrɛ yebotum enya asetsena mu enyigye ndɛ nye onnyiewiei nkwa wɔ asaase do ndaamba. Ɔyɛ nokwar dɛ mboa a irinya ma aatse Bible no ase no, nyimpa binom enyi nnkɛgye ho. Naaso, Nyankopɔn abɔ anohoba dɛ ɔbɛma hɛn ndaamba asetsena a odzi mu, ntsi ɔnnsɛ dɛ yɛma nkorɔfo siw hɛn kwan dɛ yebosũa Bible no.​—Kenkan Mbɛbusɛm 29:25; Nyikyerɛ 14:6, 7.
Fa mona Fa mona Ebɛnadze Nye Asɛmpa No?